Mpanamboatra kozatra seramika tsara indrindra | SICER
Ny mpanadio dia ampiasaina mba hanesorana ny fanilihana mavesatra avy amin'ny pulp taratasy, ary misy vatan'ny varingarina, conne top, cone eo ambany ary vavan'ny fandavana azy miaraka amina cone ambony vita amin'ny vy tsy misy fangarony sy ambany cone ary vava vita amin'ny seramika na PU.
1. Fanadiovana pulp mekanika pulp mekanika sy pulp mekanika.
2. Tsipika miala amin'ny CONP, AONP ARY EONP.
3. Tsipika pulp namboarina ho an'ny COCC sy AOCC.
4. Tsipika miala amin'ny ONP sy OMG.
5. tsipika pulp namboarina ho an'ny MOW sy SOP.
6. Rafitra fanadiovana tahiry alohan'ny milina taratasy.
• Pulp avo dia nahomby hatrany
• Safidy maro ny tahan'ny mikoriana
• Fanoherana tsara harafesina: fanoherana asidra mahery sy alkaly
• Fanoherana ny fikosohan-jaza: mahazaka fikosohan-java-bary amin'ny akora lehibe tsy misy simba
• Tsiranoka tsara: miantoka tsara ny fivezivezena maimaimpoana ireo fitaovana tsy misy fanakanana
• Vidiny fikojakojana ambany: ny fanoherana mahery vaika dia mampihena ny faharetan'ny fikojakojana sy ny vidin'ny fikolokoloana
• Pruoduce ho saritan'ny mpanjifa
Cone mpanadio avo lenta
Ny fanodinana taratasy fako dia iray amin'ireo fitaovana ilaina.
Ny vokatra tsara kokoa amin'ny fanadiovana pulp taratasy fako, miaraka amin'ny fitaovan'ny fitaovana vy tsy misy fangarony, ehance ny mpanadio ny fiakanjoana sy ny fanoherana ny harafesina.
Fitaovana: Fahadiovana avo lenta Al2O3
Sarony: faritra vy tsy misy fangarony 304 / 316L
Cone mpanadio ambany ambany
Esory amin'ny fomba mahomby ny savoka maivana, foam plastika, ranomainty fanontam-pirinty, fanalefahana mafana ary loto hafa.
Teo aloha: Valve seramika
Manaraka: Singa fanalefahana
Cone mpanadio ambany
Côle mpanadio pulp taratasy